तिलिचो ताल अवलोकन गर्न उडेका ६ हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण, यस्तो छ पछिल्लो अवस्था! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > तिलिचो ताल अवलोकन गर्न उडेका ६ हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण, यस्तो छ पछिल्लो अवस्था!
admin July 17, 2019 Uncategorized	0
लमजुङ-तिलिचो भ्रमणका लागि पर्यटक लिएर उडेका ६ वटा हेलिकप्टर लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहरमा आकास्मिक अवतरण भएका छन् । मनाङस्थित तिलिचो ताल अवलोकनका लागि भारतीय पर्यटक लिएर उडेका ६ वटा हेलिकप्टर बेसीशहरमा आकास्मिक अवतरण भएका हुन् । संसारकै सबैभन्दा उचाईमा रहेको तिलिचो ताल अवलोकनका लागि ३१ जना भारतीय पर्यटक लिएर विभिन्न कम्पनीका ६ वटा हेलिकप्टर काठमाडौंबाट मनाङ उडेका थिए । तर, निरन्तर वर्षाका कारण मनाङमा मौसम खराव भएपछि सवै हेलिकप्टर लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा अवतरण भएका हुन् ।
भारतको चर्को दवावपछि विषादी जाँच नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय